Muwaadiniinta iswiidhishka oo laga daadgureyneyo carriga Gooma - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Muwaadiniinta iswiidhishka oo laga daadgureyneyo carriga Gooma
La daabacay tisdag 20 november 2012 kl 12.52
Afar ka mid ah shanta sarkaal ee ciidanka boliiska ee ka mid ah ciidanka nabadda ee Qarammada Midoobay dalkan kaga sugan carriga Gooma ee waddankaasi Koongo ayaa laga soo daad-gureeyey, kadib kolkii ay jabhad ka soo hor-jeedda maamulka dalka Koongo la wareegtay hogaanka magaaladaa.
Maanta ayaa la shaaciyay warar sheegaya in ciidammo taabacsan jabhaddu la wareegeen maamulka gegida dayuuradaha ee magaalada Gooma.
Shacbigii magaalada ayey badankood ka socdaaleen magaalada iyagoona u baqooley dhanka xuduudda dalkaasi la leeyahay Ruwaanda. Dadkaasina oo sheegay iney ciidammadu ku amreen iney magaalada isaga baxaan.
Mikael Carlson, oo ka mid ah saraakiisha dalkan kaga sugan carrigaa sidii ey nabadda u ilaalin lahaayeen ayaa goobtaa ku sugnaan doona, isagoona sheegay inay adag tahay sidii war lagaga heli lahaa xaaladda ay magaaladu ku sugan tahay, eyna ka soo baxayaan warar is-khilaafsan, hase-yeeshee uu ammaankiisu wanaagsan yahay.
Qabsashada magaalada Gooma ayaa ka dambeeysay dhowr-maalmood oo uu dagaal ku dhex-maraayey nawaaxigaa xoogagga jabhadda iyo ciidammada dawladda oo taageero ka helysta hayadda Qarammada Midoobey.
Magaalada Gooma ayaa dhacda waqooyiga gobolka Kivu ee galbeedka dalka Koongo.